'कांग्रेस सरकारमा आए हामी बाहिरिन्छौं' (कमल थापासँगको अन्तर्वार्ता) - Himalkhabar.com
अन्तर्वार्ता/विचारबुधबार, फाल्गुण २६, २०७२
‘कांग्रेस सरकारमा आए हामी बाहिरिन्छौं’ (कमल थापासँगको अन्तर्वार्ता)
नाकाबन्दीकै वेला परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतले पहिलोपटक भारत पुग्दा कमल थापाको भूमिकाप्रति आशाभन्दा संशय बढी थियो। तर, हिन्दूराष्ट्र र गणतन्त्रविरोधी दलका नेता भएरै पनि उनले भारतीय सरकारसामु जमेर नेपालको सार्वभौमिकता, संविधान र समस्याबारे आफ्ना कुरा राखे। चीन पुगे र महत्वपूर्ण सम्झौता हुने गरिको ‘फ्रेमवर्क’ मा सहमति गरे। दोस्रोपटकको भारत भ्रमणमा उनले मधेश आन्दोलन सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनबारे अवगत गराए, जसको फलस्वरुप नै द्विपक्षीय असमझदारी हट्दै नाकाबन्दी खुल्ने वातावरण बन्यो।
प्रधानमन्त्रीको ‘सफल’ भारत भ्रमणका महत्वपूर्ण पात्र थापा अहिले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण ऐतिहासिक बनाउने तयारीमा छन्। नाकाबन्दी, धर्मनिरपेक्षता, भारत–चीन सम्बन्ध र सरकार परिवर्तनबारे उनै थापासँग गरिएको कुराकानीको संक्षेप :
नाकाबन्दीताका तपाईं दुईपटक भारत जानुभयो। प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीमा पनि हुनुहुन्थ्यो। भारतको राजनीतिक, प्रशासनिक नेतृत्वको नेपाल बुझाइ कस्तो पाउनुभयो?
हामीले भारतलाई संविधान निर्माण नेपालको सार्वभौम अधिकार हो भनेर बुझाएका छौं। नेपालको शान्ति, स्थायित्व, प्रजातन्त्र, कानूनी राज्य र मानवअधिकारबारे भारतको चासो र चिन्तालाई हामी अस्वाभाविक ठान्दैनौं। तर नेपालबारे निर्णय गर्ने नेपालीले नै हो भन्ने कुरा अहिले आएर भारतीय नेतृत्वले बुझे जस्तो लाग्छ। उनीहरूले मेरो र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रमणको वेला भारतको कुनै ‘प्रेस्त्रि्कप्सन’ छैन भनेका छन्।
प्रधानमन्त्रीले दुईपक्षीय वार्ताका क्रममा नाकाबन्दीबारे कुरा उठाउनुभयो। मैले पनि नाकाबन्दीका प्रभावबारे प्रशस्त कुरा उठाएकै हुँ। नाकाबन्दीलाई भविष्यमा दोहोर्‍याउन दिनुहुँदैन भन्ने विषयबारे दुवै पक्ष गम्भीर देखिए।
दुई प्रधानमन्त्रीको ‘वान टु वान’ भेटमा ‘नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र बनाउने’ बारे पनि कुरा भयो भन्ने चर्चा छ नि?
‘वान टु वान’ बैठकका छलफलका विषयबारे अरुलाई जानकारी हुने त कुरै भएन।
‘वान टु वान’ भेटपछि दुईपक्षीय वार्ता भएको हो। दुई पक्षीय वार्तामा भएका कुरा मात्र हाम्रो जानकारीमा हुन्छ।
संयोग मात्रै मिलेको हो। वास्तवमा नेपालजस्तो भू–राजनीतिक अवस्थितिमा भएको मुलुकले धेरै वर्षअघि नै व्यापार र इन्धन आपूर्तिमा विविधीकरण गर्ने प्रयास थाल्नुपर्थ्यो। भारतसँग सम्बन्ध नचिसिएको भए पनि रणनीतिक स्वार्थ अनुसार हामीले अहिले गरिरहेका काम गर्नुपर्दथ्यो। चीनसँगको सम्बन्ध बढाउनुको अर्थ नाकाबन्दीको रिस नभई ‘स्ट्राट्जी फर सर्भाइभल’ हो।
नाकाबन्दीकै वेला तपाईं चीन जानुभयो, हिमालपारिबाट पहिलोपटक इन्धन पनि भित्रियो। के चीनले भारतीय नाकाबन्दीलाई ‘नाकाबन्दी’ नै भनेको हो त?
पारवहनका विषयमा त चिनियाँहरूले पहिल्यै सहयोग गर्छौं भनेकै थिए। तर, नाकाबन्दीका वेला मात्रै यो ‘ब्रह्म ज्ञान’ खुलेको देखियो नि!
प्रधानमन्त्री चीन भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ। भ्रमण कत्तिको फलदायी होला ?